Xidiga Yurub Ugu Goolasha Badan Sanadkan 2017 | Raadgoob
Xidiga Yurub Ugu Goolasha Badan Sanadkan 2017
Harry Kane ayaa marka uu liiskan arko ka cadhoon kara inkasta oo uu yahay xidiga sanadkan 2017 ku dhamaystay goolasha ugu badan ee shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn laga soo dhaliyay. Haddii uu Harry Kane gool dhalin ku garaacay Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo xidigaha magac wayn ee kubabda cagta, arintu sidaa way ka duwan tahay marka laga hadlayo mushaarka uu Premier League ka qaato ee ay kooxdiisa Spurs u xadiday.
Kooxda Tottenham ayaa eedayn badan kula kulantay in ay xadiday qaab dhismeedaka mushaarka kooxdeeda waxaana la xusuustaa qabakii uu Danny Rose afka u furtay ee uu dhaliisha wayn ugu soo jeediyay laakiin waxaa la soo saaray xogta mushaarka ciyaartoyda horyaalka Premier league ugu sareeya wuxuuna Harry Kane ku jiraa kaalinta 35 aad.
Waxyaabaha layaabka leh waxaa ka mid ah in Harry Kane uu mushaar ahaan u qaato kala badhka Paul Pogba wuxuuna xidiga ree England u muuqdaa mid aan ku farxi doonin liiskan marka uu arko wax qabadkiisa 2017 iyo xidigo badan oo uu ka fiican yahay oo mushaar ahaan si wayn uga sareeya.
Paul Pogba ayaa ah xidiga horyaalka Premier league ugu mushaarka sareeya wuxuuna usbuuc kasta u xaadiraa £290,000 kun oo gini halka Romelu Lukaku oo isla Manchester United ka tirsani uu todobaadkii mushaar ahaan u qaato £250,000 kun oo gini, waana xidiga labaad ee ugu mushaarka sareeya horyaalka Premier league.
Lukaku ayaa ilaa hadda soo dhaliyay 10 gool oo Premier league ah wuxuuna 8 gool ka hooseeyaa Harry Kane kaas oo Tottenham u soo dhaliyay 18 gool oo Premier league ah isla markaana sanadkan 2017 soo dhaliyay 56 gool balse Harry Kane ayaa todobaadkii mushaar ahaan u qaata 110,000 kun oo gini oo kaliya waxaana ka sareeya xidigo ay ka mid yihiin, Javier Hernandez oo West Ham ka tirsan, James Milner oo Liverpool ah, Phil Jones oo Man United ah iyo xidigo badan oo kale.